Lazarevskoe, "ककटेल": ठेगाना, फोटो र समीक्षा
यस लेखमा आज हामी Lazarevskoye रूपमा यो स्थान बारे कुरा हुनेछ। "ककटेल", हाम्रो पाठकहरु रुचि हो जो, यो रिसोर्ट शहर को रत्न को छ। पर्यटक एक धेरै यस स्थानको भ्रमण भएको घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। Lazarev सोची को जिल्ला धेरै आकर्षक ठाउँमा छ, र हामी तिनीहरूलाई बताउन चाहेको पाठक कि हुनेछ पक्कै: यो तपाईंको छुट्टी खर्च गर्न हुन स्थान हो।
छलफल गरिने ठाउँ, सोची को प्रसिद्ध शहर नजिकै काला सागर मा स्थित छ। र यो शहर, अर्थात्, Lazarev जिल्ला को क्षेत्रको रूपमा भनिन्छ के त नजिक छ। यो Shepsi Mamaev पास गर्न नदी फैलिएको। तपाईं र तपाईंको कम्पनी को लागि - तपाईं रमाइलो रात, त्यसपछि यो स्थान को संभावना संग एक शान्त आराम छुट्टी संयोजन गर्न चाहनुहुन्छ भने।
यो आकर्षण तपाईं छोटो छुट्टी लागि हेर्न सक्नुहुन्छ बढी छन् रूपमा जहां Lazarev जाने पर्यटक को प्रश्नको जवाफ सजिलो छ। त्यसैले, धेरै vacationers यहाँ आशामा फेरि फर्कन अझै तट सबै सौन्दर्य हेर्नुहोस्। सबैभन्दा लोकप्रिय ठाउँहरू बीच:
झरना Psydag तीस मीटर को एक उचाइ देखि पतन कि पानी आफ्नो तीन Cascades आकर्षित गर्छ।
Shapsug झरना को Psydaga नजिकै स्थित छ, चार Cascades र यसको पचास मिटर माथि पहिले नै छ।
Dagomys गर्त मा स्थित Dagomys नदी, एक विभिन्न आकार को कुनै पनि cavities उपस्थिति पालन गर्न सक्ने परिणाम संग, रक तहहरू एक प्रकारको गठन जो।
घाटी Mamed प्रदर्शन गर्न उपलब्ध, तपाईं Tuapse को दिशा मा टाउको भने। साथै, त्यहाँ देखेर लायक छन् कि रक formations धेरै छ।
33 फल्स - छोटो दूरी भन्दा चरणमा एक नम्बर को लागि, सोची को तट आउनुभएका सबैले हेर्न उत्सुक छ कि एक ठाउँमा - यो साँच्चै धेरै सुन्दर दृष्टि छ।
Tulip रूख - 35 मीटर को एक उचाई र सत्र मीटर को ट्रंक व्यास पुग्छ जो magnolias को परिवार देखि आकर्षण बोट; यो बोट शरीर ऊर्जा पुनर्स्थापना जादुई शक्तिहरु छ भन्छन्।
सुन्दर घाटी "सुन्दर नारी" Thessaloniki र Volkonka बीच स्थित छ, र यो सम्भव धेरै आकर्षण हेर्न बनाउँछ जो, झरने घेरिएको छ।
Byzantine मन्दिर - कि को भग्नावशेष त यसको रहस्य यात्री, बस शौचालय देखि दुई किलोमिटर स्थित द्वारा आकर्षित छन्; XI शताब्दीमा देखि डेटिङ पुरातन स्लेट पर्खालहरु, तिनीहरूलाई थप रहस्य दिन्छ जो greenery, ढाकिएको।
यो पर्यटक गन्तव्यहरू को पूर्ण सूची छैन, तर हामी मात्र होइन दैनिक बाँकी रुचि राख्नुहुन्छ। आखिर, धेरै रमाइलो लिन दिन यात्राहरु, तिनीहरूले, साँझ खर्च गर्न आराम घटना मनाउन र बस मजा चाहन्छु। शहर को रत्न को यो उद्देश्य उपयुक्त एक लागि - "। ककटेल" क्लब Lazarevskoye दिन वा रात तपाईं निराश छैन।
संस्था बारे मुख्य कुरा
यो स्थान युरोपेली वर्ग को नाइटक्लब गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ। दुवै रेस्टुरेन्टको बाहिरी र भित्री भित्री तपाईं त्यहाँ जान चाहे कि, म यो एक बाँकी मनपराएका त, र फेरि फेरि त्यहाँ फर्केर जान इच्छा छ बाहिर लाग्यो। तसर्थ, आगन्तुक को प्रश्न जहाँ Lazarev मा, स्थानीय पक्कै यो स्थान उल्लेख पहिलो नाम बीच जानुहोस्।
समुद्र तट मा बाहिर, तपाईं चार स्तर हुन्छन् जो जटिल, नोटिस हुनेछ। सम्पूर्ण क्लब "Tropicana" को शैलीमा डिजाइन गरिएको छ र क्षेत्र रूखहरू धेरै संग लगाए छ। सजिलो संस्थाहरू संरचना कल्पना गर्न बनाउनको लागि, हामी यसलाई छ ध्यान दिनुहोस्:
अतिथि सहज वातावरण मा आराम र सुखद संगीतको मजा गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ बस्ने क्षेत्र;
कराओके क्षेत्र जहाँ आगंतुकों आफैलाई एक तारा रूपमा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ;
खेल पल्ट, प्रतियोगिताहरु र च्याम्पियनशिप समयमा विशेष गरी लोकप्रिय छ;
सेवा को एक विशेष स्तर भेटी, वीआईपी-ग्राहकहरु लागि छत;
त्यहाँ रूपमा दुई धेरै, त्यसैले नृत्य भुइँमा स्थानहरूको कहिल्यै कमी छ जहाँ नृत्य तल,;
बारहरू जहाँ तपाईं मेनु कार्डमा कुनै पनि ककटेल आदेश गर्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई यो स्थान साँझमा मात्र काम गर्दैन भन्न लायक छ। दिन को समयमा तपाईं आराम र खजुरका को छाया मा खान सक्छ। 10 बिहान5काम, कर्मचारीहरु लगभग घडी राउन्ड तपाईं प्रसन्न गर्न तयार छ।
मनोरञ्जन: Lazarevskoye ( "ककटेल")
मनोरञ्जन लागि जाँदा, त्यहाँ क्लब को आयोजकहरु कुनै बराबर छ। थिम्ड सांझ, पदोन्नति, चाडहरूमा र अन्य लोकप्रिय गतिविधिहरु को एक विशाल विविधता जवान मानिसहरू र पुरानो मान्छे आकर्षित। अक्सर आयोजित प्रचार दिन, उदाहरणका लागि, शुक्रवार मा बालिका मुक्त पट्टी भ्रमण र केही ककटेल प्रयास गर्न निमन्त्रणा। विशेष गरी आकर्षक मुक्त वायरलेस इन्टरनेट को उपलब्धता छ। यस दिन मा तपाईं प्रशंसक को एकल नेटवर्क शान्तिमा आफ्नो ट्याब्लेट वा फोन को कम्पनी मा एक ककटेल sipping देख्न सक्छौं।
अलग, यो उल्लेख गर्नुपर्छ गाउँमा Lazarevskoe रूपमा आवाज गुणस्तर VTAK ठाउँ। "ककटेल" पूर्ण सबै समय संग जा रहेको छ कि देखाउनुहुन्छ। धेरै discos, एक लेजर शो र svetopredstavleniyami सँगसँगै जो कोहीले indifferent पार्टी-goers छोड्न सक्नुहुन्न। उच्च-अन्त डीजे कसरी आफ्नो सीप र व्यावसायिक लोकप्रिय कलाकार देखाउन अक्सर यहाँ अविस्मरणीय डिस्को संगठित थाहा छ।
हामी तपाईंलाई थप र Lazarevskoye हेर्न थप उत्सुक हुन्छन् भन्ने आशा। युरोपेली व्यञ्जन "ककटेल" तपाईं एक फैशनेबल विकल्प पेय मात्र पनि प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ, तर। संस्था मा मूल्यहरु एकदम उचित, तर रूपमा अन्यत्र, आकर्षक कुरा प्रयास गर्न, तपाईं एक राउन्ड योगफल संग भागमा हुनेछ। खैर, यो बिना रूपमा? आखिर, छुट्टीको एक पटक मात्र एक वर्ष छ, र अनुभव अर्को समय सम्म पर्याप्त थियो भनेर यो आवश्यक छ पकड। र यदि यो अद्भुत क्लब पनि रात देखो, भावना को एक समुद्र तपाईंले प्रदान।
ठेगाना जो त्यहाँ कहिल्यै भएको छ जसले सबैलाई सम्झना "ककटेल पल्ट" (Lazarevskoye), Granada भनिन्छ प्रसिद्ध समुद्र तट मा स्थित छ। तपाईं यो तट साथ थिए, किनभने सारा शहर हो, यो स्थान फेला कुनै कठिनाइ हुनेछ, र तपाईँले तटीय सडक मा एक सानो पैदल आवश्यक छ। कुनै पनि स्थानीय इच्छा खुसीसाथ तपाईं क्लब को सही स्थान देखाउँछ। आखिर, यहाँ मात्र होइन पर्यटकहरुका लागि तर पनि lazarevtsy आराम गर्न, प्रेम।
पर्यटकहरू प्रतिक्रियाहरू अध्ययन, यो ग्राहकहरु को विशाल बहुमत क्लब र वातावरण, र सेवा को गुणस्तर सन्तुष्ट थिए निष्कर्षमा गर्न सकिन्छ। प्रशिक्षित क्लब कर्मचारी खुसी हुनेछन् र चाँडै सबै आदेश प्रदर्शन र पट्टी वातावरण कि मानिसहरूले यसलाई छोड्न चाहँदैनन्, त्यसैले सुखद र संक्रामक छ। सुविधाजनक सेवा एक प्लास्टिक कार्ड को सहायता संग बाँकी भुक्तानी गर्न संभावना छ।
"एडमिरल" - Divnogorsk मा एक पर्यावरण-पार्क। पर्यावरण-पार्क "एडमिरल": त्यहाँ कसरी, फोटो र समीक्षा
ब्राजिलियन मेला - क्याचर, हृदय जीत
पानी पार्क "जंगल": विवरण, फोटो, आगंतुकों को समीक्षा
25 "स्वादिष्ट" मिठाई Nutella हैं
आन्तरिक नीतिहरू Ivana Groznogo
गेटवेहरू के हुन्? गेटवे प्रकारहरू, सञ्चालनको सिद्धान्त
Slavophiles - यो ... दर्शन मा रुझान। Slavophilism र Westernism